Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Dheeraad ku saabsan Iswiidhan / Deegaanka / Gobol iyo degmooyin / Östergötlands län / Ydre
779 kiilomitir oo laba jibaaran
Jönköping 98 kiilomitir
Linköping 89 kiilomitir
Stockholm 290 kiilomitir
Degmada waxa ay ka koobantahay afar magaalo, Österbymo, Hestra, Rydsnäs iyo Asby. Österbymo waa magalada ugu wayn waxana degan dad lagu qiyaaso 860 qofood. Halkan waxa ku yala guryo kiro ah looguna tala galay qoysaska waaweyn iyo kuwa yaryarba. Hestrana waxa degan qiyaasti 480 qofood. Dadka badankood waxa ay deganyhin vilooyin ay leeyihin lakin waxa kale oo ku yaala kuryo kiro ah. Rydsnäs waxa degan qiyaanti dad gaaraya 290 qofood dadka badankood waxa ay deganyihiin vilooyin ay leeyihin. Asby waxa degan qiyaasto dad gaaraya 190 qofood. Iyada xataa dadka ugu badan waxa ay deganyihiin vilooyin ay leeyihin lakin guryo kiro ahna way leedahay. Shirkada guryahay ay degmadu leedahay waxa la yirhda Ydrebostäder AB waxa ayna leedaha qiyaasti 270 guryo ah marki laisku geeyo. Degmadu waxa ku yala qiyaas ahan 1800 oo guri iyo 1200 guri oo fasaxyada la dago.
Shirkada guryaha Ydrebostäder AB
Kaniisada Svenska Missionskyrkan
Rugta warbixinta dalxiiska
Ydreskolan(i österbymo) – xanaanada caruurta yaryar oo dadoodu kala tahay, 1-3 sano, 4-5 sano och 6-9 sano.
Hestraskolan(i Hestra) – xanaanada caruurta yaryar oo dadoodi tahay 1-5 sano.
Iskoolka Eksjö gymnasium
Österbymo waxaa ku yaala rug caafimaad, umuliso, rugta xannanada caruurta,daryeelka ilkaha dadweynaha iyo farmashiye.
Hel macluumaadka xiriirka iyo wakhtiyada furitaanka ee rugaha caafimaadka oo ku qoran Hagida daryeelka 1177 Vårdguiden. Rugta daryeelka ilkaha Farmashiye
Isbitaalka Höglandssjukhuset ee Eksjö
Shaqooyinka ka banaan gudaha Ydre